RF9000K French Door with FlexZone™, 854 L - BaganMart
Aircon (Wall Mounted Split Type) နံရံကပ် အဲကွန်း
Wonderful Air Cooler
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 399 view counts
Model : RF9000K
လုပျငနျးအမညျ : Aung Zabu Technical Services Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 09420036969,0973105369
Net Dimension (WxHxD)(mm) : 908 x 1, 825 x 932 mm
Cooling Type : Triple Cooling
Freezer Feature : Slim Icemaker
Display Type : LED Lighting (Ice Blue)
More fridge or freezer space on demandThe FlexZone™ offers the ultimate in food storage flexibility, so everything stays fresher. With one touch the compartment can be easily converted from fridge to freezer using four pre-set temperature settings.
Air-conditioner, Refrigerator, Washing Machine Brand မျိုးးစုံကို ရောင်းဝယ်ခြင်း၊တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ဆေးကြောခြင်း၊ပြုပြင်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။Cold Storage များ တည်ဆောက်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊Air con Model နိမ့်နှင့်အမြင့်လဲလှယ်ခြင်း စသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိကျမှန်ကန်စွာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Aung Zabu Sales & Services မှ Aircon , Refrigerator , Wash Machine များအား ရောင်းချပေးလျှက်ရှိပါသည်။ Aung Zabu Sales & Services မှအကောင်းမွန်ဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ Aircon Services လုပ်ပေးရာတွင် High Pressure Pump နှင့် Special Hand Tools စုံလင်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး နည်းစနစ်ပိုင်းနှင့်လက်ရာသေသပ်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် Service အဖွဲ့တိုင်းတွင်လုပ်သက်ရင့်သော Service Engineer, Service Technician နှင့် Quality Control Man တစ်ဦးစီထည့်ပေးထားခြင်း။လူကြီးမင်းတို့၏ စက်များသက်တမ်းရှည်ကြာစွာလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ Aung Zabu Service မှ နှစ်ချုပ်စနစ်ဖြင့်ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊မီးပျက်လျှင်မီးစက်ဖြင့်လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။လူကြီးမင်းတို့၏နေအိမ်၊ရုံးသုံး၊စက်ရုံများတွင် တပ်ဆင်ထားသော Model နိမ့် Air Con များကို Air Con အသစ်ဖြင့်လဲလှယ်တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊Air Con များကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးခြင်း စသည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများစွာဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
Mini Mist Fogger KB-100 ဘက်စုံသုံး ပိုးသတ်ဆေး (အငွေ့ / အရည် ) ဖြန်းစက်
Idea Air Conditioner (Split Type)
For RF9000K French Door with FlexZone™, 854 L
May I get the quotation for "RF9000K French Door with FlexZone™, 854 L" ?